Boosaaso: Qarax Gaari Oo Ismiidaamin Ah Oo Sababay Dhimasho iyo Dhaawac * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boosaaso: Qarax Gaari Oo Ismiidaamin Ah Oo Sababay Dhimasho iyo Dhaawac
Mareeg.com- Qarax Ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxlxaha qarxa ayaa maanta ka dhacay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Qaraxa ayaa dhacay goor sheegtadu markey ahayd abaaro 11:00 barqanimo ee maanta oo Khamiis ah, waxaana mar qura la mqalay qarax aad u weyn oo ka dhacay waddada ka soo baxda Suuaqa Caanaha isla markaana aada dhanka Hotel Imaraat, Uuro iyo qiiq ayaa cirka isku shareeray, waxaana firirku gaarey meelo aad uga fog halka qaraxu ka dhacay.
Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa ka dhacay goob dadku ku badan yihiin oo kutaala Magaalada Boosaaso gaar ahaan inta u dhaxeysa Hoteklkii hore ee Daru-Salaam iyo Hotel Imaraat ee Magaalada Boosaaso.
Goob joogayaal ayaa ku waramay in gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha qarxa lagu dhuftay gaari kale ay lahaayeen Ciidamada Badda Puntiland halka dad kalana ay sheegayaan in gaariga qaraxa lagu weeraray ay laheed Shirakada SARACEN oo ah Shirkad Ajnabi ah oo Ciidamada Puntiland Tababarka ka caawisa.
Warar hordhac ah oo kasoo baxaya Qasaaraha ka dhashay Weerarka Ismiidaaminta ah ayaa sheegaya in ay ku dhinteen ku dhawaad 10-qof halka in kabada 20-kana ay dhaawacyo kasoo gaareen kuwaa oo la dhigay Goobaha Caafimaadka ee Magaalada Boosaaso
Qarax Ismiidaamiin Ah & Weerar Lala Beegsaday Wasaaradda Difaaca Yemen
Somalia:Car bomb explosion rocks Bosaso